Opera GX: iyo browser yevatambi uye yavo GX Kudzora paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, Linux Mitambo, Resources
Iko kune kuwanda kwewebhu mabhurawuza eGNU / Linux, seOpera. Ndizvozvo chaizvo mugadziri uyu ari protagonist wechinyorwa chino nhasi. Uye, kunyangwe paine akareruka akavhurika sosi webhu mabhurawuza, nekuita kwakawanda, kuchengetedzeka, kuremekedza zvakavanzika zvako / kusazivikanwa, nezvimwe, chokwadi ndechekuti hapana akawanda akafanana Opera GX. Iyo bhurawuza yevatambi.
Opera GX yakabuda yoga yeMicrosoft Windows panguva ino, asi vatambi vazhinji vanoshandisa Linux vaitarisira kuti ichazosvika kune yedu yatinofarira mashandiro sisitimu zvakare uye zvaisazoitika semamwe akafanana Opera mapurojekiti asina kusvika pakupedzisira. Asi chokwadi ndechekuti rinenge gore rapfuura kubva kuvhurwa uye zvakadaro hapana chinhu.
Iyi Opera GX freeware ine zvimwe zvakanakisa maficha, senge iyo GX Kudzora. Iwo akateedzana ezvishandiso kana bhurawuza maturusi ayo iwe ausingade kuti uvhare chirongwa kuti uwane zvimwe kuita kubva kumuchina wakanangiswa kune imwe software. Panzvimbo iyoyo, neGX Kudzora iwe unogona kusarudza kuti yakawanda sei RAM, ingani CPU nguva uye kuti yakawanda sei network iyo webhurawuza ichashandisa zvakanyanya.
Nenzira iyoyo bandwidth, ndangariro uye CPU zviwanikwa inoitirwa mitambo yemavhidhiyo yaisazokuvadzwa. Uye iwe unogona kufunga ... sei urikundiudza izvi kana pamwe Opera GX isingauye kuLinux, kana pamwe wave kutofara newebhurawuza rako. Zvakanaka, zvakapusa, uye ndezvekuti muGNU / Linux haudi GX Kudzora, simba repenguin rakwana.
Ndokunge, iwe unogona kushandisa dzimwe sarudzo idzo iwe GNU / Linux inokupa iwe iva neyako GX Kudzora pasina rubatsiro rweOpera:
1 Deredza bandwidth inopedzwa nemaitiro:
2 Deredza zviwanikwa zve RAM zvinoshandiswa nemaitiro:
3 Limitera zviwanikwa zveCUU zvinoshandiswa nemaitiro:
Deredza bandwidth inopedzwa nemaitiro:
Kugadzirisa bandwidth kana sisitimu yekushandisa inoitwa nehurongwa kana chirongwa paLinux yako, kune dzimwe nzira dzakawanda. Imwe yadzo ndeye kushandisa chirongwa chinonyengera, chimwe ndechehandshaper. Iwe unofanirwa kuisa ese maviri mapakeji, sezvo iwo asiri ekutanga-kuiswa pane iyo distros nekumira. Nezve kushandiswa, unogona kusarudza imwe kana imwe, sezvaunoda, kunyangwe zvinoitwa naWondershaper kudzora traffic yezvirongwa zvese panguva imwe chete pa network network ... Heino mienzaniso yekuti hunyengeri hungashandiswa sei kudzikamisa network yekushandisa kubva, semuenzaniso, Firefox:
trickle -d 40 -u 10 firefox
Nemurairo iwoyo, urikutadzisa mashandisiro enetwork yeFirefox kusvika 40KB / s uye 10KB / s ye kurodha pasi uye kurodha zvakateerana.
Deredza zviwanikwa zve RAM zvinoshandiswa nemaitiro:
Para gadzirisa huwandu hwe RAM nzira inogona kushandiswa Chero ani zvake ari paLinux, angave ari webhu bhurawuza kana chero chaunoda, unogona kushandisa zita rechirongwa racho chairo chaunoda kudzikamisa. Semuenzaniso, fungidzira kuti urikushandisa firefox webhu bhurawuza uye iwe unoda kudzikisira RAM kune chete 0.5GB, ndiko kuti, 500MB. Nezve izvo, iwe unogona kushandisa systemd nenzira iri nyore:
systemd-run --scope -p MemoryLimit=500M firefox
Unogona kushandisa cgroups kugadzirisa mapoka enzira mune imwe nzira ... Uye zvechokwadi, ulimit sezvandatove ndatsanangura mune zvimwe zvinyorwa zveLxA.
Limitera zviwanikwa zveCUU zvinoshandiswa nemaitiro:
Kana zvauri kuda zviripo gadzirisa iyo CPU yekushandisa chirongwa chinoita, ipapo izvi zvinokufadza. Kune izvo pane zvakawanda sarudzo, kubva pakushandisa zvimwe zvishandiso izvo systemd inokupa iwe, kune inozivikanwa renice, cpulimit, kushushikana, nezvimwe. Semuenzaniso, shandisa ps kutsvaga maitiro (uye PID yayo, semuenzaniso, ngatiti iri muna 8188) inoenderana nechirongwa chaunoda kusiyanisa. Ukangozviziva, unogona kushandisa renice kushandura mashandisiro eCPU. Rangarira kuti hunhu hwakagamuchirwa hunosvikira -20 kusvika 19, iine akanakisa ekupedzisira ari iwo angadya zvishoma. Kana iwe waida kuchipa icho chidiki chinokosheswa kukosha kuitira kuti zvisatorega kudya:
renice +19 -p 8188
Imwe sarudzo ndeiyi gadza cpulimit, nekuti iro pasuru harina kubatanidzwa mune yako distro. Paunenge uchinge waisa, iwe unogona kudzora yako CPU yekushandisa quota kune, semuenzaniso, 25% mune imwe yenzira mbiri:
cpulimit -l 25 -p 8188 &
cpulimit -l 25 firefox &
Unogona kana Enda kumberi uye zvakare gadzira mamwe marudzi emiganhu kana maitiro, senge iwo eI / O as Ndakatsanangura apa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Opera GX: iyo browser yevatambi uye yavo GX Kudzora paLinux
Hapana chakaipa chakanaka kuziva
AMD miniPC: yakasimba-ine simba Raspberry Pi